🥇 ▷ Shirkadda 'Google' Duplex 'waxay soo degtay Spain waxayna suurtogal ka dhigtay in la ogaado saacadaha hawlgalka ee karantiil ✅
Shirkadda ‘Google’ Duplex ‘waxay soo degtay Spain waxayna suurtogal ka dhigtay in la ogaado saacadaha hawlgalka ee karantiil
Duplex Google, sirdoonka macmalka ah ee kaaliyaha Google uu kuu sameeyay horeba wuu jiray waxaa lagu heli karaa Isbaanish. Shirkadda farsamada ayaa soo saartay qalabkeeda gudaha Spain taas oo qayb ka ah istiraatiijiyaddeeda ku aaddan inay ka caawiso ganacsiyada inta lagu jiro cudurka faafa ee COVID-19, waxayna awood siin doontaa la xiriir maqaayadaha iyo xarumaha si aad u ogaato waqtigooda adeegga ..
Duplex kuma imaan doonto shaqadii asalka ahayd ee dhiggeeda Mareykanka, taa bedelkeeda, aaladda keligeed wuxuu diiradda saari doonaa wicitaannada ururkaaga si loo ogaado goorta uu furan yahay iyo inuu dhow yahaye inta lagu gudajiro coronavirus karantiil. Google ayaa u adeegsan doonta macluumaadkan si ay u cusboonaysiiso natiijooyinka ka soo baxa matoorada raadinta iyo Khariidadaha.
The Imaatinka duplex-ka Spain waxay dhacday ka dib markii ay degtey New Zealand, Boqortooyada Midowday, Australia iyo Kanada iyo albaabka u fur si mustaqbalka aan uga faa’iideysan karno sidii markii horeba loo qorsheeyay: boos celis maqaaxi toos ah. Ilaa uu dillaacay, Google wuxuu ku deeqay ikhtiyaarkan gudaha Mareykanka, halkaas oo dadku ay u isticmaali karaan Kaaliyeyaasha inay la xiriiraan shirkadda.
Duub waxaa si rasmi ah loogu dhawaaqay inta lagu gudajiray shirkooda hormarinta I / O ee 2018, halkaasoo kaqeybgaleyaasha ay la yaabeen wicitaan ay sameeyeen a sirdoonka aan dabiiciga aheyn iyadoo la adeegsanayo is faham guud iyo hakad aadanaha. Tani waxay suurtogal u tahay iyada oo loo mahadcelinayo shabakadda neural ee neerfaha ee Google, taas oo u suurtagelisa is-gaarsiinta iyo xiriirka dabiiciga ah ee ka dhexeeya AI iyo dadka.
Ka dibna waa lagu sii daayaa gudaha IPhone iyo Terminalka Android ee Maraykanka si aad u wacdo makhaayadda. Duplex waa loo habeeyay si aad naftaada u barato kaaliyaha Google markii wicitaanku bilaabmay, ilaa dadku dhammaadka khadka waxay ogaadeen inay wacayaan robot.
Isaga oo ku faafay Spain macnaheedu waa sidaas Wadamada kale ee ku hadla Isbaanishka waxay u badan tahay inay heli doonaan Duplex mustaqbalka fog-fog, sida la mid ah kaaliyaha Google. Hirgalkeeda oo ah aalad lagu ogaado saacadaha shaqada kaliya ayaa u shaqeyn doona tijaabada tijaabada halkaas oo wax laga beddelo si waxqabadka wanaagsan loo sameeyo
Duplex waa la qabsan kara wada hadalka dhib la’aan, sidaa daraadeed waxaa lagu dabaqi karaa meelaha kale. Sannadkii hore Google ayaa ku dhawaaqday inay heli doonto websaydh si ay uga caawiso buuxinta foomamka adeegyada khadka tooska ah, si aysan waqti ugu lumin inaad samayso.
👇 Inbadan oo kujira Hypertext